အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: ခါတော်မှီ....
ဒီလိုကိစ္စ အသေးအမွှားလေးတွေတော့ တီ မဖြေချင်ဘူး။ ဒဲာ့တာတွေက အင်တာဗျူးထဲမှာ ထည့်တာတော့ ထည့်လို့ရတယ်။ ထည့်လို့မရလို့တော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒဲာ့တာတွေက ဘာမှ မဟုတ်တဲ့ မေးခွန်းလေးတွေ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် တခြားမေးခွန်းလေးတွေ မေးပါလားလို့…………... နော်။
Posted by တီချမ်း at 4:49 PM
အန်တီချမ်း May 27, 2010 at 5:14 PM
well. nice writing style. (tha yaw sar kaung kaung yay nauing tar be) carry on!
ဖိုးစိန် May 27, 2010 at 5:19 PM
ခုလို သတိတရ ထည့်ရေးလို့ ကိုယ်ကပဲ မြောက်ချင်သလိုလို..
အန်တီချမ်း May 27, 2010 at 5:29 PM
အမြင်ကပ် ခံရမှာပေါ့ နည်းတောင်နည်းသေး
Mon Petit Avatar May 27, 2010 at 5:30 PM
You make me laugh my head off!!!
သက်ပိုင်သူ May 27, 2010 at 6:20 PM
Rita May 27, 2010 at 6:48 PM
ဟင် ဘယ်မှာလဲ မသိဘူး။
နောက် ဒါမျိုး များများရေးပါ။ ရီရတယ်။
နှစ်ယောက်တည်း သိတာပဲ ကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေ ရေးရင် မရီရဘူး။
jr.lwinoo May 27, 2010 at 7:07 PM
khin oo may May 27, 2010 at 9:02 PM
ရင်ထဲက လတစ်စင်း June 1, 2010 at 1:33 PM
တစ်ခုပဲ ပြောစရာရှိတယ်။ စာကြောင်းတွေက အရမ်းကြပ်နေသလို ဖြစ်မနေဘူးလား။ ရန်ကုန်က အဲယားကွန်း ဘတ်စ်ကားကို အားကျတယ် တူပါရဲ့... :P
အန်တီချမ်း June 4, 2010 at 1:18 AM
little: မယ်ရာရယ် နောက်တစ်ယောက်ရယ်နဲ့ စကားပြောနေတာ
ကိုလင်း July 30, 2012 at 2:52 AM
အရမ်းကောင်းတယ်တီချမ်းရဲ့သရော်စာလေးက တီချမ်းကိုအပြင်မှာမြင်ဘူးချင်တယ် ကျွန်တော်တို့ကပြည်ပမှာငတ်နေတာလေ တီချမ်းရေးတာလေးတွေ ဖတ်ပြီး ချက်စားကြည့်နေရတာ ခင်ဗျားတော်တော်စိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူပဲဗျ